Sony A7R III, ၄၂ မီဂါပစ်ဇယ်နှင့် 42K ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သောမှန်မဲ့သစ် Gadget သတင်း
Sony သည်ကုမ္ပဏီနှင့်ကဏ္ member ၏အကျော်ကြားဆုံးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည့် A7 မိသားစုဝင်အသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒီအသစ် Sony A7R III ကို ၎င်းသည်ဘက်ထရီပိုမိုပေးနိုင်သောမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ autofocus စနစ်ဖြင့်; ယခင်ဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုထားသည့်ပုံရိပ်ပရိုဆက်ဆာထက်ပိုမြန်သည်။ Y ယူရို ၃၀၀၀ ကျော်တဲ့ဈေးနှုန်း.
အလားတူပင်၊ Sony A7R III အသစ်သည်နောက်လများတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မော်ဒယ်လ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်အားထက်သန်သူများနှင့်ပညာရှင်များအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်လာသည်။ စတင်ရန် Sony A7R III တွင် ၄၂.၇ megapixel Exmor R CMOS အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးဆူညံသံအနည်းငယ်သာဖြင့်ရလဒ်များကိုရရှိရန် Sony ကတိပြုသည့်ပြောင်းလဲမှုအချို့ရရှိခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း Image processor သည်ယခင်မျိုးဆက်ထက် ၁.၈ ဆပိုမြန်သော Bionz X ဖြစ်သည် နှင့် ၅-axis image stabilizer ကိုထည့်သွင်းထားပြီး resolution မြင့်မားသောပုံရိပ်များကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက်သန့်စင်ပြီး ၁၀ ကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုကိုရရှိရန်အတွက် shake low-shutter fps.
Sony A7R III တွင်အီလက်ထရောနစ် viewfinder လည်းပါဝင်သည်။ ဒီတစ်ခုကအမျိုးအစားဖြစ်တယ် 720p resolution ဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်သည် (အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့နောက်ကျောမျက်နှာပြင်လည်းရှိသည်လိမ့်မယ်, ငါတို့အချို့သောဖမ်းယူဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မီနူးအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်။ ဒီနှင့်အတူ mirrorless သင်သည်တတ်နိုင် ဓါတ်ပုံများကို JPEG နှင့် RAW ပုံစံများဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်.
ဒီဗီဒီယိုအပိုင်းမှာဒီ Sony A7R III ရဲ့ဇတ်ကောင်လည်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုထပ်ထည့်လို့ပါ 4K Fps ဖြင့် 120K ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Full HD အရည်အသွေးဖြင့်လည်းသင်လုပ်နိူင်သည်။
ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ပုံတွေကိုဝိုင်ဖိုင်မှဝေမျှပါ နှင့် စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက် သငျသညျအဝေးမှာနေတဲ့အခါ။ USB type C v.3.1 လည်းရပါလိမ့်မည်။ Sony A7R III တွင် SD slot နှစ်ခုပါရှိပြီးဘက်ထရီတစ်ခုတည်းတွင်အလိုအလျောက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Sony A7R III ကိုလာမည့်နိုဝင်ဘာလတွင်ဥရောပဈေးကွက်များ၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် (ဒါဟာဘယ်နေ့ကမှမှတ်ချက်မပေးပါ) ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အကယ်၍ သင်ကရချင်တယ်ဆိုရင်သင့်အိတ်ကပ်ကိုပြင်ပါ စျေးနှုန်းကိုယူရို ၃၅၀၀ မှစတင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » ဓာတ်ပုံ » Sony A7R III, ၄၂ မီဂါပစ်ဇယ်နှင့် 42K ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောမှန်မဲ့သစ်